Sida loogu muuqdo ka dheer adoo si fudud u badalaya qaabka aan u labisano | Ragga Stylish
Fasal yeesho | | nololeedka, fashion, Isbeddellada
Inbadan ayaa ah dadka waxaa laga yaabaa inay dareemaan isku kalsooni dhererkooda. In kasta oo ay run tahay in nooca kabaha aan isticmaalno aan ku qurxin karno bilic ahaan, maahan habka keliya ee naga caawin kara inaan jilno dherer badan. Kama hadlayo hababka mucjisada, dhammaanteen waan ognahay inaysan waxtar lahayn oo waxa kaliya ee ay rabaan ay tahay inay lacag helaan, laakiin waxaan ka hadlayaa dhawr tabaha fudud markay timaado labiska.
In muddo ah hada, gaagaabku waxay noqdeen kuwo moodada ah, kuwa markii aan yaraynay ka kor maray anqawga oo aan moodnay inaan ka nimid waraabinta. Muuji canqowga jaantus sawirka markaa waa khiyaano yar in loo ekaado wax ka dheer.
Dharka noocan oo kale ah ayaa noqday mid la moodo sanadihii la soo dhaafay waxayna noo ogolaaneysaa inaan soo bandhigno muuqaal ka dheer, ma ahan inay u muuqato inay yaryihiin, laakiin maxaa yeelay sidoo kale waxay ku xiran yihiin lugta, qaabeynta. Nooca noocan ah ee surwaalka ah ayaa loo yaqaannaa goos goos waana hubaal inaad ku aragtay iyaga ragga bandhiga bandhiga ama kuwa caanka ah sida Pharrell Williams, oo aan korka kaaga tusayno sawir.
Laakiin dharka noocan ah kaliya diirada laguma saarin kordhinta cabirka lugaha, laakiin sidoo kale waan awoodnaa ku hel qaabka jaakadaha, sidii ay u ahaayeen dibi-dagaalyahan. Jaakadaha gaara dhererka kalyaha laakiin gebi ahaanba ma daboolaan gacanta. Mar labaad waxaan haynaa sawirka sare ee Pharrell Williams tusaale ahaan.
Maxay tahay in lagu xisaabtamo marka la isticmaalayo dharka noocan ah, oo na siinaya muuqaal caadi ah, taasi waa taas Kuma dari karno kabo leh cirib badan. Maxaa dhacaya haddii aan isku dari karno waa xoogaa koror qarsoodi ah oo ku yaal gudaha kabaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Sida loo eego dherer adigoo si fudud u badalaya qaabka aan u labisano